अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी श्रीमती नेपाल आएर मानसिक त*नाब दिएपछि आ*त्मह*त्या ! बहिनिले लेखिन मनछुने स्टाटस – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी श्रीमती नेपाल आएर मानसिक त*नाब दिएपछि आ*त्मह*त्या ! बहिनिले लेखिन मनछुने स्टाटस
अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी श्रीमती नेपाल आएर मानसिक त*नाब दिएपछि आ*त्मह*त्या ! बहिनिले लेखिन मनछुने स्टाटस
प्रिय रबि दाइ। सबैलाई माया गर्ने मान्छे , सबैलाई सहयोग गर्ने मान्छे। राम्रो मान्छे नै भगवानको पियारो हुदो रैछ तेसैले हजुरलाई आफ्नो घर लियर जानू भयो। हजुरको आत्माले शान्ती मिलोश ।रबि दाइको मृ त्यु आ त्माघा ती हुनै सक्दैन यो सरासर मा रिएको हो:मान सिक रुपले बिछिप्त बनाइ ,आफ्नै पत्नी बाट। बिहे भयको3बर्ष पुगेको, बिहे गरेको केटी ranjana mainali बिहे गरेछी australia मा बसेर बि. येन. पढेको र दाइ नेपाल मै रहनु भएको थियो।
बिहे गरेको केही समय पछी- रन्जना मैनालीले तेरो र मेरो स म्बन्ध छैन भन्ने आफ्नो पतिसग, अनि फेरि पढ्न को लागि ससुरालाई फकायर पैसा माग्ने ( करिब 40 लाख ) जति। दाइ चोखो माया गर्ने मान्छे आश गर्नु भयो, उस्ले तनाब दिराखी दाइ तड्पिराख्नु भयो। डिवोर्से दियेर आशलाई मर्दिनु पर्थियो , पैसाको लागि झुलायेर दाइलाई राखेको प्रमाणित भएको छ।
रन्जना मैनालीको जन्मेका घरमा दाइलाई बोलाउने प्रयोग गर्ने : येता जानू ज्वाइँ , उता जानू ज्वाइँ , यो गर्नु, त्यो गर्नु भनेर खुब प्रयोग गरियो । सबैलाई माया गर्न दाइ सबैलाई सहयोग गर्नु हुन्थियो। रन्जना मैनालीले आफ्नो सम्बन्धकोबारे घर मा सबैलाई बतायेको पाइयो। सबैकुरा जान्दा जान्दै पैसाको लागि र आफ्नो स्वार्थको लागि दाइलाई प्रयोग गरियोको प्रमाणित भयको छ।
करिब7दिन अगाडि रन्जना मैनाली नेपाल आएको – दाइको अनुहार पनि हेर्न नचाहने तर पैसा माग्न आउन खोज्ने सबै परिवार भएर : छोरीको australia maa college fees तिर्नको लागि। रन्जना मैनाली को बाउ मेरो छोरीलाई छोयो भन्ने ब*ला*त्कारको केस हाल्दिन्छु भन्ने दाइलाई । दाइको अन्तिम सासले रन्जना भन्दा हेर्दा नि नहेर्ने यो कस्तो खाल्को मन को भगवान ।यो कस्तो खाल्को प्रवृत्ति हो भगवान । रन्जना मैनालीको अस्लि रुप रबि दाइको परिवारले बल्ल चिन्नु भयो , चिनिसक्दा दाइ भगवानको पियारो हुनु भयो।
हाल दाइको ह त्यारा रन्जना मैनाली थु नामा छ। कडा भन्दा कडा कार बाहि गरियोस् मेरो दाइको आत्मालाई शान्ती मिलोस।
घ*टना – भन्डरा चितवन
साभार- अस्मिता पाठक बाट
चालक निदाएका कारण बस दुर्घटना